Britain oo doonaysa inay bilawdo 'bog cusub' xiriirka dalalka Khaliijka | Gaaloos.com
Home » News » Britain oo doonaysa inay bilawdo 'bog cusub' xiriirka dalalka Khaliijka
Britain oo doonaysa inay bilawdo 'bog cusub' xiriirka dalalka Khaliijka
In la hormariyo xiriirka ganacsi ee dalalka Khaliijka kadib markii UK ay u codaysay inay ka baxdo Midowga Yurub, ayaa xooga la saarayaa booqasho laba maalmood oo ay ra'iisalwasaaraha Britain Theresa May ku tagayso Baxrayn.
Waxay noqon doontaa ra'iisalwasaarihii ugu horeeyay ee UK iyo siyaasi dumar ah ee markii ugu horaysay ka qayb gasha shirka Golaha Iskaashiga Khaliijka ee lixda waddan ay ku jiraan (Gulf Co-operation Council).
Mrs May ayaa sheegtay in dadka qaar ay ku doodayaan inaan la adkayn xiriirka waddamadan sababtoo ah xaalada xuquuqda aadanaha oo aan wanaagsanayn.
"Laakiin ma ilaalino waxa aan qiimayno iyo xuquuqda bini'aadanka anagoo ka sii jeesanayna xaalada" ayay ku adkaysatay.
Ra'iisalwasaaraha ayaa ka qayb galaysa casho ay la yeelanayso hogaamiyayaasha Sacuudi Carabiya, Kuwait, Isutaga Imaaraadka Carabta , Qadar, Baxrayn, iyo Cumaan Talaadada habeenkii, inta aysan ka qayb galin shirka subaxnimada Arbacada.
Waxay ku dhawaaqi doontaa iskaashi teknoolajiyada hawada sare ay la yeelanaysa Abu Dhabi iyo hab Viso shan sano soconaya oo shirkadaha UK ee ganacsiga ka samaynayo Sacuudi Carabiya.
"Waxaa jira waxyaabo badan oo aan isla samayn karno, hadii ay ahaato inaan iska caawino ka hortaga argagixisada, maalgashiga Khaliijka ee lagu dhisayo magaalooyinka UK ama ganacsatada Britishka ee caawinaya dalalka Khaliijka si ay ugu guulaystaan isbadalada waqtiga dheer ee ay doonayaan". ayay sheegtay Mrs May.
" Marka waxaan rajaynayaa booqashadayda inay bilaabayso bog cusub ee xiriirka u dhaxeeya iyo Khaliijka."
Mrs May ayaa la kulmi doonta dhalinyaro dalka Baxrayn si looga hadlo horumarka siyaasada iyo bulshada ee la gaaray tan iyo kacdoonkii 2011, taasoo keentay dhaleecayn sida xooga leh ee ay dowladda uga hortagtay.
"Shaki kuma jiro in ay jiri doonaan dad dhahaya in UK aysan la samayn xiriir ganacsi iyo iyo dhinaca ammaanka dalalkan, sababtoo ah xaaladooda xuquuqda bini'aadanka oo aan wanaagsanayn". ayay sheegtay
"laakiin waxaan ku guulaysan karnaa waxyaabo badan markaan xiriir la samayno waddamadan, oo aan la shaqayno si aan u dhiiri galino oo aan u taageerno qorshahooda isbadalka.
"Sidaas ayay Britain ay u noqon kartaa inay wax fiican ka samayso adduunka, inay ammaankeeda xoojiso iyo inay u samayso fursado ganacsatada".
Dowladda ayaa sheegtay inay heshay fursado dhan £30bn ee ay ganacsatada Britishka ay ka samayn karaan meelo kala duwan gobolka, shanta sano ee soo socota.
Title: Britain oo doonaysa inay bilawdo 'bog cusub' xiriirka dalalka Khaliijka
Posted by galmada Net, Published at 2:30 AM and have 0 comments